Wararka Maanta: Sabti, Dec 7 , 2013-Nin ay si aad ah u Doon-doonayeen Ciidamada la Dagaallanka Argagaxisada ee Dalka Kenya oo lagu dilay Magaalada Mombasa
Xasan Suleymaan Mwayuyu ayay booliiska Kenya sheegeen inuu ahaa nin tababarro ku siin jiray gudaha dalkaas xoogag ku biiraya kooxda Al-shabaab ee Soomaaliya, iyadoo la sheegay in dhallinyarada uu inta badan ka kexeyn jiray deegaannada Kwale, Changamwe iyo Kisauni.
Xaaska Nyiro oo lagu magacaabo Raxma Xasan ayaa iyadana horay loogu eedeeyay inay hubka iibin jirtay. Hay’adaha xuquuqda aadanaha ayaa si aad ah u cambaareeyay dilkan, iyagoo sheegay inay tahay mid sharciga dalkaas ka baxsan.
“Dilalka waa inay noqdaan kuwo sharciga loo maro, balse ma ahan in inta qof la iska eedeeyo haddana lagu toogto dariiqyada, taasina waa mid ka baxsan sharciga,” ayuu yiri Xasan Khaalid oo ah madaxa ururka xuquuqda aadanaha ee Haki Africa.
Sidoo kale, Mr. Khaalid ayaa warbaahinta Kenya u sheegay in booliisku ay soo saareen digniin lagu soo qabanayo ninkaas, waxayna ahayd in marka hore sharciga la geeyo qofka si uu isku difaaco ama u qirto dambigiisa.